Ndege dzave kuda kupfuma kubva kunopera ndege zvikwereti zvako
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege dzave kuda kupfuma kubva kunopera ndege zvikwereti zvako
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kana iwe ukakanzura kana kushandura chero kubhururuka mumakore maviri apfuura, ita shuwa yekutora yako isina kushandiswa tikiti kukosha kusati kwanyanyisa.
Ndege dzakagara pamadhora gumi emabhiriyoni e tikiti risingashandiswe uye ikozvino nguva iri kuvashaira.
Kana COVID-19 payakanganisa hurongwa hwemunhu wese hwekufamba. nendege dzakawedzera kudzima kwavo uye rebook marongero.
Vazhinji vafambi vakachinja kana kukanzura ndege vane zvikwereti zvekufambisa zvakapihwa kubva kumhepo dzingave dzichikurumidza kupera.
Kunyangwe ndege dzendege dzakarova zvakaoma muna 2020, vazhinji vava kuda kuita mari zhinji kubva kune vafambi vanopera zvikwereti zvekubhururuka. Sekureva kwemishumo, vatakuri vemhepo vagere pamamirioni gumi emadhora yetikiti risingashandiswe uye ikozvino nguva yave kupera.
Kana COVID-19 payakanganisa hurongwa hwemunhu wese, nendege dzakakwidziridza kudzima kwavo nemitemo yebook. Vanhu vazhinji vakachinja kana kukanzurwa kwendege vane zvikwereti zvekufamba zvakaburitswa nendege izvo zvinogona kukurumidza kupera. Heano maitiro ekutarisa uye kushandisa ako ekushambadza zvikwereti zvisati zvanyanyisa.
Tsvaga Emails Ekare
Kana iwe ukakanzura ndege, iwe ungangodaro wakatumirwa tsamba yekusimbisa ine ruzivo maererano neyako kiredhiti kiredhiti. Nzira yakanaka yekudzora kutsvaga ndeyekutaipa zita renhandare mubhokisi rako rekutsvaga, uye kusefa ipapo. Maemail anowanzo sanganisira "kiredhiti kiredhiti" kana "kuchengetedza" mune wenyaya mutsara.
Gadzira Mbiri neAirline
Paunenge uchinge wawana email yako, panofanirwa kuve nemirairo yekuti ungapinda sei pawebhusaiti yendege uye rebook nekiredhiti kiredhiti kako. Kubva ipapo unozokwanisa zvakare kutarisa kuti une chikwereti chakawanda sei uye kuti chichapera riini.
Fonera iyo YeMuchadenga Yevatengi Service Chikwata
Iyi sarudzo ingangoda awa kana maviri pafoni. Kana usina chokwadi chekuti une chikwereti chekushandisa kana kwete zvingave zvakanaka kutaura nemumiriri wevateereri vendege. Nezita rako uye yekutanga nhamba yekusimbisa, iwe unozogona kushandisa kiredhiti iyo yawakasiya.
Kana kiredhiti kiredhiti kako kapera, hapana kuchidzorera. Kana iwe ukakanzura kana kushandura chero kubhururuka mumakore maviri apfuura, ita shuwa yekutora yako isina kushandiswa tikiti kukosha kusati kwanyanyisa.
Kure kure, United Airlines Ndeye chete ndege huru yekuUS yakawedzera kukosha kwematikiti asina kushandiswa kusvika Zvita 31, 2022.